XIISAD KA OOGANTAY PUNTLAND !
Bosasso,1da September 2002
Report by Banadir.com
Dawlad Goboleedka Puntland ayaa habeen hore gacanta ku dhigtay hub fudud oo ka kooban 40 qoryaha boobaha ah ee AK-47 iyo rasaastooda iyo dhawr qori oo ah nooca loo yaqaan Sk-50, hubkaas oo saarnaa dooni mareysay xeebta magalada Qandala ee Gobolka Bari .
Waxaa Ciidanka Madaxa Dawlad Goboleedka Puntland Col. Cabdullahi Yuusuf uu tuhunsan yahay in hubkaan loo waday taageerayaasha ay iska soo horjeedaan ee taabacsan Jaamac Cali Jaamac .
Laakiin Reer Xaaji Faarax oo ah milkiilaha doontaa ayaa shaaca ka qaaday in hubkaa fudud ay iyagu iska leeyihiin , kagana ilaashadaan doonyahooda afduubka laga caadeystay beryahan danbe gobolka Puntland .
Ilmo Xaaji Faarax waa reer ka baayac mushtar kalluumeysiga oo si aad ah looga yaqaan Gobolka Bari .
Waxayna xiisaddan hubkan soo shaac baxay xilli uu Xoghayaha Guud ee Jamciyadda Quruumaha ka dhexeysa Koofi Anaan u soo magacaabay guddi adkeeya cunaqabteynta dhinaca hubka ah ee Golaha Ammaanka ku soo rogay Dalka Soomaaliya dabayaaqadii sanadkii 1992 .
Ilaa iyo iyo iminka wax war ah oo la xiriira qabashada hubkaan fudud lagama hayo Maamul Goboleedka Puntland ee uu madaxda ka yahay Cabdullahi Yuusuf Axmed .